Dadka Waaweyn Keliya, Xidhiidhka Teendhada Raaxada ee Mexico | Goobaha nasashada
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » jiga » Dadka Waaweyn Keliya, Xidhiidhka Teendhada Raaxada ee Mexico
Jebinta Wararka Safarka • Dalka | Gobolka • Hoteelada & Dalxiisyada • Mexico • News • jiga
Naviva waa fikrad cusub oo hami leh oo bixisa adeeg shakhsiyeed oo heer sare ah iyo naqshad cusub. U dhow dabeecadda sidii hore.
"Naviva waa fikrad cusub oo hami leh oo bixisa adeeg shakhsi ahaaneed iyo naqshad cusub oo martida u soo dhawaysa dabeecadda sidii hore," ayuu yidhi Vince Parrotta, Madaxweynaha Four Seasons, Hawlgallada Hotel - Ameerika Galbeedka. "Markii ugu horeysay ee dib-u-gurashadan gaarka ah ee gaarka ah, martida ayaa mid-ka-mid ah ula kulmi doona hage aqoon leh inta lagu jiro khibradaha fekerka leh ee soo dhaweynaya dhaqanka iyo dabeecadda Mexico."
Naviva waa Goob Dalmareedka Afarta Xiliga ah, oo ku taal Punta Mita, Mexico, waana goobtii ugu horeysay ee dadka waaweyni ay ku nool yihiin Ameerika, waxayna hadda xaqiijinaysaa imaatinka Diseembar 1, 2022 iyo wixii ka dambeeya.
Dib u gurasho dabeecadeed oo ka kooban 15 teendho qaali ah oo ku dhex yaal 48 hektar oo kayn ah (19 hektar) oo ku taal jasiirad gaar ah oo ku taal badweynta Baasifiga, waayo-aragnimada Naviva ee aan la barbar dhigin ee aan caadiga ahayn waxay abuurtaa jawi kobciya bulshada, korriinka shakhsi ahaaneed, iyo kobcinta aqoonta.
Iyada oo leh 15 teendho qaali ah oo ay naqshadeeyeen Luxury Frontiers - dhammaantoodna leh barkado qulqulaya oo gaar ah - Naviva waa mid ka mid ah meelaha ugu yar ee Four Seasons ee adduunka. Habka wax ka beddelka ee Dalxiiska iyo hagayaasha Naviva ee la shahaadiyey ayaa isu yimaada si ay u abuuraan taabasho sare, haddana aan la qiyaasi karin waayo-aragnimada qaangaarka-kaliya ee ay dhiirigelisay biophilia, oo macnaheedu yahay "jacaylka nolosha ama noolaha."
"Meeshayada lagu qariyey kaynta jiirarka ah waxay abuurtaa dareenka ah in la go'o meel fog, marka dhab ahaantii, waxaan kaliya u jirnaa duulimaad gaaban oo Maraykanka," Ronny Fernández, Maamulaha Dalxiiska, Naviva, A Four Seasons Resort. "Goobteena dabiiciga ah ee aan la dhaqmin ayaa si dabiici ah u dhiirigelisa martida inay galaan safaradooda gaarka ah."
Ballanqaadka dhex-dhexaadka ah ee Dabeecadda
Naviva waxay u dabbaaldegtaa xidhiidhka ka dhex jira ee bini'aadmigu la leeyahay dabeecadda iyada oo loo marayo naqshad biophilic - hab dhismeed oo dadka ku xidha agagaarkooda dabiiciga ah.
Naviva, martida ayaa isla markiiba ku qulqulaya bannaanka marka ay yimaadaan, iyagoo la kulma hagagooda buundada bamboo ee qumbaha oo eegaysa doox qotodheer oo kaynta ah.
Martidu waxay sii wadi doonaan inay la kulmaan xidhiidhada tooska ah ee dabeecadda inta ay joogaan.
Teendho kasta oo raaxo leh oo gooni u taagan ayaa leh meelo bannaan oo gudaha iyo dibadda ah oo si aan kala go 'lahayn isugu dhafan, taasoo u oggolaanaysa martida inay qorraxda qaataan oo ay uriyaan neecawda badweynta oo ay weheliso xidhiidh aan toos ahayn oo dabiici ah oo leh textures iyo dhar u eg qaababka dabiiciga ah ee laga helo deegaanka ku hareeraysan.
Luxury Frontiers waxay nashqadeeyeen meelaha bannaan ee teendho kasta si ay uga qaybgalaan rabitaanka dabiiciga ah ee bini'aadamka si ay u raadiyaan rajada, magangalka, qarsoodiga, iyo xiisaha qol fadhiga hawo-furan iyo qol jiif oo gooni ah oo u qulqulaya barkad qulqulaya oo gaar ah iyo sagxad ballaadhan oo leh hammock iyo qubays bannaanka.
Waaya-aragnimada Maxaliga ah ee Saxda ah ee leh Dareenka Goobta
Nolol maalmeedka Naviva waxay dejisaa marxaladda isbeddelka shakhsi ahaaneed iyadoo martida ay sahamiyaan rabitaankooda oo ay ogaadaan kuwa cusub iyagoo si kal iyo laab ah u taageera hagayaasha Naviva ee la shahaadeeyay. Waayo-aragnimada Naviva ee aan qornayn sida muunad kafeega Mexican-ka-yar-yar, xiddig-fiirinta, iyo ku- biirista caadooyinka qorrax-dhaca, ayaa ka mid ah waxqabadyada iska-soo-baxa ee martida si ay uga daba-tagaan Dalxiiska.
Martidu waxay sidoo kale ku raaxaysan karaan waayo-aragnimada Saxiixa Naviva ee keenaya dabeecadda, hiddaha, iyo khibradda kartida iyo dhaqanka maxalliga ah ee safka hore, sida booqashada farshaxanka maxalliga ah ee ku guuleystay abaalmarinta Jose Juan Esparza gurigiisa gaarka ah iyo istuudiyaha, qubeys kaynta habeenkii, daaweynta dhawaaqa, iyo neefsashada.
Safarrada Maskaxda, Jidhka, iyo Nafta
Ka leexashada wax-soo-saarka fayoobaanta ee hudheelka dhaqameed, Naviva waxay bixisaa meelo badan oo xiriir ah oo ay ku jiraan laba boodh oo isboorti oo lagu dhufto kaynta quruxda badan, temazcal dhaqameed Mexican ah ama "guriga kulaylka," jimicsi bannaanka ah, geed-kaynta deggan ee Alma Pool, iyo Baaxadda gaarka ah ee 575-foot (175-mitir) ee xeebta Pacific-ga ee saafiga ah - meel xasiloon oo lagu barto yoga ama miyir-qabka.
Aag kastaa waxa ay kor u qaada xidhiidhka bini-aadmiga ee dabiiciga ah iyada oo ku dhex gelinaysa martida dhinacyo la taaban karo oo aan la taaban karin oo deegaanka ah, sida ka-noqosho maalin badhkeed ah mid ka mid ah cawska qumbaha oo kale ah taas oo ay dhiiri galisay iniinaha geedka Ceiba ee deegaanka oo ay bixiyaan magan-gelyo, taas oo u oggolaanaysa isbeddelka tamarta gudaha.
Dhammaan caadooyinka guud ee Naviva waxay ka faa'iidaystaan ​​sifooyinka bogsashada ee maaddooyinka asaliga ah, laga bilaabo reishi dib-u-cusboonaysiinta iyo fuuq-celinta barafka ilaa dhagaxyada dabiiciga ah iyo dhoobada midabka leh ee laga helo Mexico oo dhan.
Naviva waxay sidoo kale siinaysaa martida fursad ay si buuxda diiradda u saaraan fayoobidooda jireed. Shaqooyinka Naviva waxaa ka mid ah kalfadhiyada yoga ee cliffside ee Risco Terrace, socodka dabiiciga ah iyo wadooyinka orodka, iyo tababarka xoogga leh ee jimicsiga hawada bannaanka ah ee bannaanka ku eegaya Baasifigga, halkaas oo martida ay ku dari karaan qaababka hadda jira sida dhagaxyada iyo geedaha, isku xirka dabiiciga ah oo leh fidin kasta iyo neef kasta.
Cuntooyinka iyo Daqiiqadaha Xusuusta leh ee Ka-fiirsashada Muuqaal-badeedka Xeebta
Raaxada rusticka ah ayaa la keenay nolosha iyadoo laga eegayo xeebaha badweynta Pacific Copal, wadnaha Naviva.
In ka badan si fudud makhaayad, booska la wadaago waxaa loogu talagalay in lagu kiciyo dareenka joogitaanka qolka fadhiga iyo jikada guri gaar ah, martiqaadka martida si ay isugu soo ururiyaan ciyaaraha, akhriska, wada sheekeysiga, fikradaha, iyo muusikada. Ciyaaraha gacanta lagu sameeyo sida backgammon iyo miiska foosball ee laga sameeyay alwaax dib loo soo ceshaday oo ay sameeyeen farsamayaqaannada Mexico ayaa diyaar u ah tartan ciyaareed.
Copal Cocina, martidu waxay dareemi karaan tamarta karinta nool ee jikada hawada furan, taas oo xudunta u ah booska waxayna ka kooban tahay dhammaan hababka wax-karinta ee dabiiciga ah ee dabiiciga ah oo leh godadka BBQ-dhaqameedka, iyo rotisserie-dabka qoryaha, iyo alwaax - foornooyinka dabka.
Bad qabadyada quruxda badan iyo wax soo saarka xilliyeedku waa dhiirigelinta iyo aasaaska wax bixinta maalinlaha ah ee cusub.
Dareen Farway, Weli Guriga u dhow
Xeebta Baasifigga ee Mexico, gudaha Riviera Nayarit, Naviva waxay ku taal cidhifka woqooyi ee Bahía de Banderas oo ku taal isla jasiiradda Four Seasons Resort Punta Mita. Kaliya 45 daqiiqo u jirta Madaarka Caalamiga ah ee Puerto Vallarta, jannadan iskeed isku koobtay waxay ku dhex taal kayn 48-acre ah (19-hektar).
Teendhooyinka raaxada waxay ka bilaabmaan USD 3,950 habeenkii oo ay ku jiraan dhammaan cuntooyinka iyo cuntooyinka fudud wakhti kasta oo maalinta ah oo dhan ee Resort, 24-saac cunto teendho ah, barkadda iyo adeegga xeebta, dhammaan cabitaannada ay ku jiraan khamri qaali ah iyo ruuxyo, hal 60-daqiiqo isboorti daawaynta martida kasta, hawlaha bulshada, maskaxda iyo fasalada jidhka, waayo-aragnimada Naviva aan qornayn, qorshaynta hagaha, iyo adeegyada gudaha teendhada. Saxiixa khibradaha Naviva, cabitaano naadir ah ama kuwa khaas ah oo la dalbado, daawaynta isboortiska dheeraadka ah, xiisado gaar ah ama tababar, iyo wareejinta garoonka diyaaradaha ayaa diyaar u ah kharash dheeri ah.
Martida Naviva waxay sidoo kale si buuxda u helayaan gelitaanka Four Seasons Resort Punta Mita, oo ku taal kaliya shan daqiiqo. Dalxiiska waxaa ku yaal toban maqaayado iyo baararka, laba koorsooyin golf, saddex barkadood, laba xeebood, iyo tas-hiilaad jimicsi iyo jimicsi dheeraad ah.
Wax badan oo ku saabsan: yoga | maqaayadaha | Ameerika | Resort | Hotel
Dalxiisayaasha Ameerikaanka ah ee Dibadda: Si aad u tilmaanto ama aadan u tilmaamin? maqaayadaha|
IMEX America waxaa laga aqoonsaday ururka qabanqaabiyayaasha xaflada Ameerika|
Ameerika Hotel Resort maqaayadaha yoga
Qorshayaasha dhacdada ayaa ka wada hadlaya dhijitaalka, fikirka dabacsan iyo...
Bayaanka 1-da May World Tourism Network
Balaayiin iibsada Isboortiga, Dalxiiska & Diblomaasiyada...